​धुर्मुस सुन्तलीको सातौँ बैवाहिक बर्षगाँठ : आजका दिन पनि सामाजिक काममै ब्यस्त ।
Sat Feb 25, 2017 Studio Time: 17:23:19
मंसिर १४, काठमाण्डौँ । नेपाली हाँस्यब्यङ्ग्यको क्षेत्रमा चर्चित कलाकार सिताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे बिवाह बन्धनमा बाँधिएको आज सात बर्ष पूरा भएको छ । अनि त आज कुञ्जनाले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा लेखेकी छिन्– तपाईँलाई पाएर म भाग्यमानी भएकी छु । आजको दिन मेरो लागि सबैभन्दा सुन्दर दिन हो । मेरो प्रिय पति तपाईँलाई बैवाहिक बर्षगाँठको धेरै धेरै शुभकामना । सम्झिने हो भने सात बर्ष थोरै समय त होईन । तर, यी जोडीलाई यो समय त्यति लामो लागेको छैन । यसो नलाग्नुको कारण रहेछ–दुईजना बीचको घनीष्ठ प्रेम । सिताराम र कुञ्जना एकअर्कालाई अत्यन्तै माया गर्छन् । एक अर्काले गर्ने काममा सँधै साथ दिन्छन् । त्यसैले कुञ्जना भन्छिन– मलाई त मेरो प्रत्येक एनीभर्सरी पहिलो झैँ लाग्छ । मेरीबास्सैको पर्दामा धुर्मुस सुन्तली बनेर जोडी जमाएका यी कलाकार नेपाल सरकारको सरसफाई दूत हुन् । कलाकारितासँगै सामाजिक सेवामा सक्रिय यी जोडी आज पनि रामेछापमा छन्–त्यहाँ चलिरहेको सरसफाई अभियानका लागि । सातौँ एनिभर्सरी कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ ? भनी सोध्दा कुञ्जनाले भनीन्–आज हामी रामेछापमा हुन्छौँ , संयोगले सामाजिक कामका लागि । सितारामले पनि यसबर्षको एनिभर्सरीका लागि खासै योजना बनाएका रहेनछन् ।
यी कलाकारले बिवाहको सातौँ बर्षगाँठ मनाईरहँदा, बिवाह हुँदा ताकाका दिनहरु सम्झिदा रमाईलै लाग्ला । सिताराम, ज्योतिष विज्ञानमा विश्वास गर्छन् । सातबर्षअघि ज्योतिषले भने यसपाली बिहे गरेनौ भने अब सात, आठ बर्ष बिवाह हुन्न । उमेर पुगिसकेको मान्छे, साथमा मायाँ गर्ने साथी पनि छ । सात, आठ बर्ष कुर्ने हो भने जे पनि हुन सक्छ । अनि धुर्मुसले सुन्तलीलाई प्रस्ताव राखे । तर, सुन्तलीले त्यो प्रस्तावलाई सजिलै स्विर्कान भने सकिनन् । माया भने अति नै गर्थिन् । मायाको अघि सुन्तलीको जोर चलेन र दशैँताका विवाह बन्धनमा बाँधिए । विवाहमा खासै तामझाम नगरेका यी दुईको बिवाहलाई कतिले त रिलको विवाह नै पनि भन्ठाने रे । तर, सुन्तली र धुर्मुसले जिन्दगीभर सँगै बाँच्ने, सँगै मर्ने बाचा कसम खाई रियल विवाह गरेका थिए ।
सुन्तली र धुर्मुस त्यस बेला आफ्नो करिअरको पिकमा थिए । फ्यानहरु धेरै थिए । एकथरी भन्थे–बिहे भएपछि तिमीहरुको फ्यान स्वाट्टै घट्छ । तर, अहिले यो बुझाई गलत सावित भईसकेको छ । धुर्मुस र सुन्तलीको अभिनय र सामाजिक कामलाई मन नपराउनेको कमी छैन । सात बर्ष निक्कै मीठोगरी बित्यो । यत्तिका बर्षहरुमा उनीहरुको ब्याबसायिक प्रगती पनि उल्लेखनीय छ । अर्को उपलब्धी उनीहरुको उत्तराधिकारी जन्मेकी छिन–सुबिहानी । परिवारको आकार बढेको छ । अनि सँगै खुसीको पनि । नेपाली हाँस्यब्यङ्ग्य क्षेत्रका चम्किला तारा सिताराम कट्टेल र कुञ्जनालाई बैवाहिक बर्षगाँठको धेरै धेरै शुभकामना ।
सुन्तली र धुर्मुसको प्रेमकथा
सिताराम कट्टेल (धुर्मुस) र कुञ्जना घिमिरे (सुन्तली)को जोडी मज्जैले जमेको छ । यो जोडी कसरी जम्यो होला ? कौतुहलताको विषय हुन सक्छ । टेलिफिल्ममा अभिनय गर्दागर्दै उनीहरुको प्रेम जीवन सुरु भई झाङ्गीएको हो । र प्रेममा बिताएको केही बर्ष पछि विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन् । अभिनयका क्रममा भेटेका यी कलाकारले सुरुमा एकअर्काका आनीबानी मन पराए । पछि मान्छे मन पर्यो । प्रेममा परे र विवाह गरे ।
सुरुवाती दिनमा, सुटिङ सेटमा अलीअली बोलचाल हुन्थ्यो उनीहरुको । एकअर्काबारे थाहा पाउन उनीहरुलाई पनि मोबाईल सहयोगी बन्यो । धुर्मुस लजालु स्वाभावका थिए । सँगै हुँदा मनका कुरा भन्ने आँट उनमा थिएन । त्यसैले पनि सुन्तलीलाई फोन गरिरहन्थे । सुन्तलीले पनि घरिघरी ग्रीन लाईट दिएजस्तो उनलाई लाग्थ्यो । मन र आँखाले धेरै बोली सकेको भान उनीहरु दुबैलाई भइसकेको थियो । धुर्मुसले मनको कुरा भन्ने हिम्मत गर्थे । सिधै भन्न सक्दैथे ।
करियर अघि बढाउने समय थियो । दुबैजनालाई प्रेममा परेको स्पष्ट भइसकेको थियो । मायाप्रेममा लाग्दा परिवारलाई घात पो हुने हो की ? भन्ने सुन्तलीलाई लाग्यो । तर मायाँ त बढ्दै थियो । उनी सम्झिन्छिन्– दिर्घकालीन रुपमा सम्बन्ध अघि बढाउने हिसाबले सोचेँ । धुर्मुसले गर्ने सम्मान र बानी व्यवहारले नै मलाई खासमा आकर्षित गरेको हो । एउटै क्षेत्रको मान्छेले समस्याहरु पनि बुझ्छन् भन्ने उनलाई लाग्यो । एकअर्काबारे राम्रोसँग बुझेपछि अन्तत धुर्मुसको प्रस्ताव स्वीकारिन । घरको जेठी बुहारी भएर घर सम्हाल्न सकुँला की नसकुँला ? भन्ने चिन्ता रह्यो उनलाई । तर, पारिवारिक छलफल पछि विवाह भईछाड्यो ।
विवाह अघि फोनमा धुर्मुस सुन्तलीबीच बारम्बार कुरा भईरहन्थ्यो । तर, लामो कुराकानी भने हुँदैनथ्यो । किनकी दोहोरो कुरा गर्दा धुर्मुस नर्भस भई हाल्थे । भाग्यले जुराएको जोडिजस्तो अनुभुति गर्छन्, दुबैजना । सिधै प्रेम प्रस्ताव राख्न नसकेको देख्दा सुन्तली नी छक्क पर्थिन् । मन पराउँछ भन्ने उनलाई थाहा थियो । बिवाह पछि बरु धुर्मुस जिस्केर थुप्रै कुराहरु भन्छन् । तर, विवाह अघि त्यस्तो केहि कुरा नभएको सुन्तली बताउँछीन् । कामको सिलसिलामा सुटिङमा गएको बेला पनि त्यति बोलीँदैनथ्यो । त्यहि पनि कसरी कसरी माया बसी हाल्ने रहेछ । सायद आँखा र मनले धेरै बोल्यो कि ? सिधै भेटेर कुराकानी पनि हुँदैनथ्यो, सुन्तलीले भनिन् ।
उनीहरु प्रेममा हुँदा धेरै रमाईला घट्नाहरु पनि भएका रहेछन् । त्यसमध्येकै हो सुन्तलीको मोबाईल । धुर्मुस सुन्तलीको निकटता बढाउने मोबाईल सुन्तलीले हराईन् । मोबाईल हराएपछि , दुबैलाई तनाव भयो । सुटिङको लागि बाहिर निस्केका बेला अचानक मोबाइल हराएकी थिईन सुन्तलीले । त्यो बेलाको क्षण सम्झँदै सुन्तली भन्छिन् म विरामी थिएँ । मैले ज्याकेट लगाएको थिएँ । हतार हतारमा मोबाइल ट्याक्सीमै खसेछ । म आत्तिएँ तर धुर्मुसले नआत्तिनु भनेर सम्झाउनु भयो ।
अभिनय क्षेत्रमा संघर्ष गरिरहेको थिए । सबैको कन्ट्याक नम्बर त्यसमै थियो । साह्रै चिन्तामा थिए । धुर्मुस भन्छन्, त्यस लगत्तै म कतार गएको थिएँ । त्यहाँबाट फर्कंदा ५ हजारको मोबाइल ल्याइदिएँ । कतारबाट १३ हजार जति हात परेको थियो । त्यही मध्येबाट ५ हजारको मोबाईल सुन्तलीको लागि किनी दिएको थिएँ । उनको मोबाईल हराउँदा उनलाई जस्तै मलाई पनि चिन्ता लागेको थियो । मोबाईल लिन सुन्तलीले मानेकी थिईनन् । तर, पछि स्वीकार गरिन् । यसले प्रेमलाई अझै बलीयो बनाउन मद्धत गर्यो ।